Sandesh Prabhahबुवालाई मेरो प्रश्न : सौरभ सापकोटा Sandesh Prabhah
बुवालाई मेरो प्रश्न : सौरभ सापकोटा
गुणगान गाइन्छ सधैं , बास्ना छर्छ फुलले जीवन धरौटीमा राख्ने बुवाको गुणगान गाउछ कस्ले?घर लथालिङ्ग हुन्छ आमा बिना तर वास हुदैन बुवा बिना ।।परिवारको खातिर आफ्नो सपना अधुरो पारेर हिड्ने बुवालाई कस्ले सम्मान गर्दै न र ? म रुन्छु ,कराउछु सम्हाल्न आइ हाल्नुहुन्छ । मागेको कुरा झट्ट ल्यादिनुहुन्छ । तर आफ्नो सबै इच्छा र आकंक्षालाई मारेर किन मेरो परिपुर्तिको लागि सधै तयार आवस्थामा रहनु हुन्छ ? रात भरी आफ्नो निन्द्रालाई मारेर किन हाम्रो लागि जाग्नु हुन्छ ?
आफू च्यातिएको जुत्ता लगाएर , मलाई किन ब्रान्डेड जुत्ता किन्दिनु हुन्छ? मलाई के कुराको कमि छ ,के छैन त्यो सबै थाहा पाउनुहुन्छ तर आफुलाइ सख्त आवश्यक परेको कुरा किन थाहा नपाएको जस्तो गर्नु हुन्छ? पर्समा पैसा छैन तर भोलि जसरी भएपनि घर पठाउछु भन्ने भार किन लिनुहुन्छ ? हरेक क्षणको दुखलाई भुलेर किन हामिलाई सुख दिदै हुनुन्छ ??
कहाँबाट आउँछ बुवा यस्तो बलियो मन , परिवार प्रतीको त्यत्रो अठोट मिहेनेत , आखिर तपाईं पनि त मनुष्य हो ! किन येति धेरै स्नेह ……..? भनेर बुवालाई एकनाश सङ प्रश्न गर्दा उहाँको आखाबाट गहभरिएका आँसु बगेको देखें । त्यो दृश्य देख्नासाथ बुवालाई अंगालो हालें । इच्छा र आकंक्षामा लागे भने आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्ने छोरा ? परिवार छ मेरो,परिवारमा हर्ष र खुशी देख्दा मेरो हरेक इच्छा र आकंक्षा पूरा भएको अनुभूति हुन्छ । छोरा, तिमिले यो प्रश्नको जवाफ थाहा पाउने छौं ,जब तिम्रो परिवार भएर तिमी घरको मुलि हुने छौ अर्थात बुवा ….
पोष्ट अवलोकन : 298